युवकको हत्या गर्न वडाध्यक्षको सरकारी मोटरसाइकलको प्रयोग ! - बडिमालिका खबर
युवकको हत्या गर्न वडाध्यक्षको सरकारी मोटरसाइकलको प्रयोग !
बझाङमा युवकको हत्या गर्न वडाध्यक्षको सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग भएको खुलेको छ। छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका– ३ का अमृत सिंहको खुँडा प्रहार गरि विभत्स हत्या गरिएको घटनामा सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काले छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष विकास ऐडीको सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग भएको कुरा आएकाले अनुसन्धान भइरहेको दिनेशखबरलाई बताए।
उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको बताइन्छ। खड्काले सिंहको हत्या प्रकरणमा स्वयंम वडाध्यक्ष समेत शंकाको घेरामा रहेकाले थप कुरा अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने बताए।
उनकाअनुसार सिंहको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा मंगलबार नै छबिसपाथिभेरा–२ का ज्ञानबहादुर कडायलाई पक्राउ गरिएको छ भने अर्का युवक प्रकाश ऐडी फरार छन्। प्रकाश नातामा वडाध्यक्ष ऐडीका भाइ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयका अनुसार वडाध्यक्षको मोटरसाईकलमा खुँडासहित आएका उनीहरुले सिंहको हत्या गरेका थिए। मोटरसाइकल प्रयोगबारे वडाध्यक्षसंग बुझ्न सम्पर्क गर्न खोजेपनि प्रयास सफल हुन सकेन ।
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–३ को बन्नीचौर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको चुनाव सकेर घर फर्किने क्रममा भएको विवादपछि सिहको हत्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट उम्मेदवार गजेन्द्र धामी २८ मतले काँग्रेस निकट उम्मेदवार लोेकेन्द्र बोहरासँग पराजीत भएका थिए।
धामीले १ सय ४९ र बोहराले १ सय ७७ मत प्राप्त गरेको बुझिएको बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक खडकाले दिनेशखबरलाई बताए। उनका अनुसार हत्या गरिएका सिंह विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा विजयी बोहरा निकटका व्यक्ति हुन्। यसअघि समेत सो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा विवाद हुँदै आएको बुझिएको छ।
कोरोनाका कहर बाट सचेतना फैलाउदै
अलपत्र रहेको बाह्रबिस शाखाको एम्बुलेन्स प्रशासनले मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउदै
बाजुरामा शववाहन नहुदा फोहोर फाल्ने टिफर र यात्रु बोक्ने गाडिमा शव बोक्दै